Semalt SEO Atụmatụ maka Iwu Firm Marketing
Na nso nso a, ndị ọkàiwu na-eche ọtụtụ ihe mgbochi ndị metụtara ahịa ahịa n'ịntanetịya bụ asọmpi na-arịwanye elu na mgbanwe nke àgwà ndị ahịa. N'ihi ya, Search Engine Optimization aghọwo ihe kachasị mkpa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ.
SEO bụ omume na-agụnye ịhazi ma saịtị ma na saịtị ndị ọzọnke ebe nrụọrụ weebụ nke a na-atụle site na engines ọchụchọ na ogo. Ọtụtụ usoro SEO na-adabara na ọrụ dịgasị iche iche, kama iji nweta ihe ịga nke ọmana ịkwado ụlọ ọrụ gị na ụlọ ọrụ iwu, ha ga-akọwapụta ya n'ụzọ kwekọrọ. Ahịa na ụlọ ọrụ a dị iche, ozugboiwu ụlọ ọrụ na-akwado iwu na ụkpụrụ
Jack Miller, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị gosipụtara isi ihe ndị ị ga-atụle mgbe ị na-akọwapụta atụmatụ SEO maka ụlọ ọrụ iwu.
1. Nnyocha Research
Nzọụkwụ mbụ n'ịchọpụta ebe nrụọrụ weebụ bụ nyocha ọchụchọ. Onye ọka iwunwere ike ilekwasị anya na isiokwu ndị na-egosi na onye nyocha ahụ na-ezube ịbanye maka ọrụ iwu. Okwu ndị a ga-enwe ezigbo oluiji hụ na search engine ga-eduzi okporo ụzọ ya. Isi ihe dị na usoro a bụ ịchọpụta ndị ahịanwere ike pịnye n'ime ogwe ọchụchọ ahụ.
2. Kpọọ Kpọọ na Ọrụ
Usoro ọzọ nke gosipụtara arụmọrụ ya bụ oku a kapịrị ọnụime ihe. Emere nke a iji manye onye ọbịa ahụ ka ọ rụọ ọrụ. Ugbu a, imepụta oku iji mee ihe ga-achọ mgbalị ụfọdụ na atụmatụnke ahụ ga-apụ apụ. CTA ga-ekwenye na onye nchoputa ahụ ga-ahụ ozi ahụ n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na ọ naghị agagharị site na ọtụtụ ozi..Hakwesịrị itinye oku a ka ọ rụọ ọrụ na ibe ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ na mpaghara kachasị anya, dịka ọmụmaatụ, nkụnye eji isi ebe nrụọrụ weebụ.
3. Usoro ikpe ọka
Nke a na-ezo aka na koodu HTML nke a na-etinyekarị na ọdịnayaiji nyere ihe nchoputa aka ichota mmekorita nke di iche iche di iche iche. Ụlọ ọrụ iwu ahụ nwere atụmatụ nke aka yanke na-eme ka search engine mara ụdị ọdịnaya nke metụtara ọkachamara iwu ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu. Na-edebanye ọdịnaya gị na atụmatụenyere aka meziwanye onu ogugu click-through results search engine.
4. Ụkpụrụ Omume Iwu Iwu
Google crawls na indexes ọdịnaya intaneti na ihe nhazi na nke nwere ike imen'ụzọ. Ya mere, ọ dị mma ịhazi ebe nrụọrụ weebụ gị iji nweta akwụkwọ maka ebe ọ bụla a na-eme ihe ma jikọta omume ndị a niile n'ụzọ ziri ezi.Nke ahụ ga-ewepụ ibu arọ nke ịchọta ọdịnaya dị mkpa na weebụsaịtị.
5. Ejikọta Njikọ
Njikọ Njikọ bụ otu ihe ọzọ na-emetụta ọkwá dị eluna nsonaazụ ọchụchọ. Otú ọ dị, ọ bụghị njikọ niile hà. Ya mere, onye ọka iwu chọrọ inweta njikọ site na isi mmalite ndị dị eluna-ekwu okwu na ya. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke njikọ njikọ dị elu na ebe nrụọrụ weebụ gị, nke ka mma ọ ga-ebuli na engines ọchụchọ.
N'ụbọchị a na nká, ịmepụta saịtị na saịtị abụghị ịhọrọ maka ndị ọka iwu.Kwa ụbọchị, ndị ahịa na-agbanye na nyiwe n'ịntanetị iji chọta ozi gbasara ọrụ iwu. Ọkachamara ndị ahịa achọpụtala, nke ahụatụmatụ SEO zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ igosi na saịtị mbu nke nsonaazụ ọchụchọ Source .